Jacaylkii isu keenay dad kasoo kala jeeda Afrika iyo Aasiya - BBC News Somali
Jacaylkii isu keenay dad kasoo kala jeeda Afrika iyo Aasiya
Tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii cunsuriyadda ee Koonfur Afrika - iyo xitaa dhowr sano ka hor xilligaas - dhalinyarada reer Koonfur Afrika waxay xor u ahaayeen inay shukaansadaan qofkii ay rabaan.
Laakiin xiriirka dhex mara dadka madow iyo bulshooyinka reer Aasiya ee dalkaas ku nool wuxuu ahaa mid dhif ah oo aan inta badan dhicin.
In ay waalidiinta aqbalaanna, ma ahayn wax si fudud loo heli karo.
#Blasian (Isku darka dadka madowga ah iyo kuwa Aasiya)
Waxay ahayd dabayaaqadii sanadkii 2019-kii, Ithra iyo Tumelo, oo labaduba 24 jir ahna waxay ku jireen sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashada caafimaadka oo ay ka dhiganayeen jaamacaddaha Wits ee magaalada Johannesburg.
Sannadkoodii ugu horreeyayba waxay noqdeen saaxiibbo ,sanadkii saddexaadna waxay billaabeen inay bannaanka isku raacaan. Waxay ahaayeen lamaanaha kaliya ee Afrika iyo Aasiya kasoo kala jeeda ee ku dhex jira 300 oo ardayda safalkooda ah.
Baraha bulshada ayaa si aad ah loogu faafinayaa xiriirka ka dhaxeeya dadka Afrikaanka ah iyo kuwa reer Aasiya - mararka qaarna waxaa barnaamijyo laga sameeyaa caqabadaha ay la kulmaan.
Ithra iyo Tumelo labaduba waxay horay xiriir ula soo sameeyeen dad ka baxsan jinsiyaddooda qowmiyad ahaaneed - laakiin labaduba waxay qireen inay walwal yar dareemayeen markii ay shukaansanayeen dad caddaan ah.
"Waxay ahayd sida in haddii aad shukaansaneyso qof caddaan ah uu yahay wax lagaa filan karay," ayuu yiri Tumelo. "Waxaan dareemayay in qof walba uu kuu cudurdaarayo haddii aad xiriir la yeelatid qof caddaan ah".
Waxay dhasheen iyagoo xor ah
Cunsuriyaddii jinsiyadaha ee ka socday Koonfur Afrika wuxuu si rasmi ah u idlaaday sanadkii 1994-kii, markii uu madaxweyne noqday Nelson Mandela.
Wuxuu ahaa isla sanadkii ay dhasheen lamaanahan - oo sidaas ay ku noqonayaan waxa loogu yeero jiilkii dhashay iyagoo xor ah.
Jiilkan oo hadda ah 40% ka mid ah bulshada guud ee dalkaas waxay noqdeen dadkii ugu horreeyay ee reer Koonfur Afrika ah oo si xor ah u shaqeeya, u noolaada, una codeeya si kasta oo ay rabaan.
Ithra qoyskeeda waxay kasoo jeedaan qowmiyad lagu magacaabo Cape Malay, oo ah dad ka farcamay qowmiyado kala duwan oo reer Aasiya ah, kuwaasoo Koonfur Afrika ku noolaa muddo qarniyo ah.
Gabadhan hooyadeed waxay kasoo horjeedday nidaamkii cunsuriyadda.
Laakiin ma jiro qof diyaar u ahaa inuu taageero xiriirka ay la yeelatay Tumelo.
Waxay ka billaabatay in si weyn looga soo horjeestay group-ka Whatsapp-ka ee ay qoyskeeda ku idil yihiin. Markii ugu horreysay Ithra kama aysan war qabin waxa socday.
"(Ayeeyadeey) ayaa telefoon kasoo wacday walaashey waxayna ku tiri 'Maxay dadku dhihi doonaan haddii ay arkaan gabadha aan ayeeyada u ahay oo xiriir la leh wiil madow ah?' sababtoo ah meesha ay kasoo jeeddo waxaa aad looga qaddariyaa qowmiyadda, bulshaduna way taqaannaa wax kasta."
Marka ay BBC-du la kulmeysay lamaanahan, Ithra ayeeyadeed lama aysan hadlin muddo ku dhawaad saddex bilood ah.
Ithra hooyadeed, Rayana
Walaalaheed iyo qoyskeeda oo dhan markii hore kuma aysan qancin go'aankeeda.
Hooyadeed, oo lagu magacaabo Rayana waxay ku nooleyd Kenya laakiin dib ayey ugu guurtay Johannesburg. Ol'ole xoog leh ayey u gashay sidii looga tkhalusi lahaa cunsuriyaddii ka jirtay Koonfur Afrika.
Laakiin fikradihii qaar wali way jiraan
Dalka Koonfur Afrika, way adagtahay in si caadi ah loo aqbalo xiriirka isdhexgalka bulshooyinka kala duwan ah.
Daraasad lasoo saaray sanadkii 2017-kii ayaa lagu muujiyay in wali uu dalkaas ka jiro fikirka ay dadka aaminsan yihiin ee ah inaan lasoo dhaweysanin dad qalaad.
Waxay warbixinta daraasadda toosh ku ifisay in aysan wax isbaddal ah ku dhicin tirada dadka aqbali karta in qof qaraabo ahaan aad ugu dhow uu xiriir la sameeyo qof kale oo qowmiyad kale kasoo jeeda.
Laakiin sidaasoo ay tahay waxaa sii kordhaya tirada dadka aan isku qowmiyadaha kasoo jeedin ee is guursanaya.
Sanadkii 2011-kii waxay tiradaas noqotay ku dhawaad boqolkiiba hal.
Caqabadaha ay la kulmaan lamaaneyaasha kala duwan ee is doorta waxay u badan yihiin kuwo kasoo wajaha dadka dhalasho ahaan ugu dhow.
Ugu dambeyn Ithra iyo Tumelo waa la ansixiyay.
Waxaa la gaaray maalintii uu dhacayay kulanka weyn, Modjadji oo Tumelo hooyadiisna waxay sameysay wax walba oo karaankeeda ah. Subaxdii oo dhan waxay diyaarineysay raashinka kala duwan ee ay kusoo dhaweyn lahayd martideeda, kuwaasoo u badnaa kuwa ay dhaqan ahaan u leeyihiin qoyske ay kasoo jeeddo gabadha ay wiilkeeda is calmadeen. Waxay xitaa soo iibisay hilib xalaal ah oo ay ugu talagashay.
"Waa inay igu bartaan sida aan ahay, anigana aan ku barto sida ay yihiin," ayey tiri iyadoo dhoollacaddeyneysa. Waxay sheegtay in iyada qudheeda aysan jirin sabab loogu oggolaan lahaa inay qoyskeeda u keento nin kasoo jeeda qowmiyad kale.
Xoogaa kaddib waxaa albaabka soo garaacay qoyskii gabadha. Waxaa isla socday Ithra, hooyadeed Rayana iyo ninkeeda, iyo afarta gabdhood ee walaalaheed ah, dhammaantoodna waxay wadeen ubaxyo. Waxay sidoo kale wadeen raashin nooca ay dadka reer Aasiya isticmaalaan ah.
Intaas oo isla fadhisa waxaa haddana kusoo biiray Tumelo walaalkiis iyo aabihiis, Phuti.
Halkaas ayey isku barteen labada qoys, waxayna dhacdadaas ka mid tahay kuwa dhifka ah ee lagu arko Koonfur Afrika.
Tumelo oo ah nin daggan oo aan hadal badneyd wuxuu maalintaas u hadlay kor isagoo waaninaya lamaanaha da'da yar.
"Markii uu Mandela noqday madaxweynaha waxaan u maleyneynay in waqtigaas uu ahaa kii soo afjarayay cunsuriyadda. Laakiin waligeed ma dhammaanin, sida ay aragti ahaan ila tahay aniga, xaaladdu xoogaa way kasii xumeyd sidii aan fileynay", ayuu yiri.
"Waxaan rabay inaan ilmaheyga u koriyo si fiican, ayna wax ka bartaan iskuul ka fiican kii aan aniga soo maray - Iskuul ay la dhigtaan dad qowmiyado kale kasoo jeeda - waa inay bartaan wixii aan aniga baran waayay. Waligey ma dhex galin dad Hindi ah ilaa muddo aad u dambeysay laga soo gaaray, xilligii aan shaqeynayay. Jiilkan ayaa arrintaas xallinaya. Jiil kasta waxaa laga rabaa xallinta dhibaatada sugeysa, wayna u heli doonaan xal", ayuu yiri.